कोभिड विरुद्धको खोपको पहिलो लट बेलायत आइपुग्यो - Safalnews
सफल न्युज द्वारा २०७७ मंसिर १९ गते शुक्रबार १०:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, मंसिर १९ गते । कोभिड विरुद्धको फाइजर र एनबायोटेकको खोपको पहिलो खेप (लट) बेलायत आइपुगेको छ । गोप्य स्थलमा उक्त खोप राखिएको छ । बेलायतमा अस्पतालको खोप केन्द्रहरुमा वितरणका लागि तयारी गरिएको छ ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा प्राध्यापक जोनाथन भान टमले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका सूचीका सबैलाई खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारी मात्रामा तिब्र गतिमा खोप वितरणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । तर खोप लगाइने प्राथमिकता सूची भने अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाब दिनुभयो ।
बेलायतमा आपूर्ति गरिएको फाइजर र एनबायोटेकको कोभिड विरुद्धको खोप बेल्जियममा उत्पादन गरिएको छ । र यूरो सुरुङ्ग मार्ग मार्फत् बेलायत पुर्याइएको छ ।
बेलायतको खोप अनुमति दिने हतारिएको निर्णयको अमेरिकामा सङ्क्रामक रोग विज्ञ समेत रहनुभएका डा. एन्थोनी फौसीले आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले बेलायतले खोप लगाउने निर्णय गर्दा आवश्यक साबधानी नअपनाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । बेलायतको उक्त हतारिएको निर्णयले सर्वसाधारण सहजै खोप लगाउन स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर बेलायतले उक्त प्रतिक्रियाको रक्षा गर्दै खोप सुरक्षित र प्रभाबकारी रहेको दाबी गरेको छ । पछि डा. फौसीले समेत असमझदारीमा आफूले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको र त्यसका लागि क्षमा चाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अमेरिकामा खोप लगाउन दिइने अनुमति प्रकृया बेलायतको भन्दा बढी समय लिने भएकोले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभयो ।फाइजर र एनबायोटेकको खोपले कोभिड १९ विरुद्ध ९५ प्रतिशत सुरक्षा दिने दाबी गरिएको छ । फाइजर बेल्जियमले चार करोड डोज आपूर्ति गर्ने बित्तिकै खोप सबैका लागि पहुँचमा पुग्नेछ ।
यूरोपमा कोरोना सङ्क्रमणले सबैभन्दा बढी ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने बेलायत पहिलो राष्ट्र हो । गत् बिहीबार चौबीस घण्टामा ४१४ जनाको मृत्युपछि बेलायतमा कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु हुनेको संख्या ६० हजार ११३ पुगेको छ । बेलायतभन्दा अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको र भारतले मात्रै कोरोना सङ्क्रमणबाट अत्याधिक मृत्युको सामना गरेको छ । यद्दपी प्रति एक लाखमा बेलायतमा यी राष्ट्रहरुको अपेक्षा सबैभन्दा बढी मृत्यु दत्र्ता गरिएको छ । प्रति एक लाखमा अत्याधिक मृत्यु हुने राष्ट्रमा बेल्जियम, सान मरिनो, पेरु, एण्डोरा, स्पेन र इटालीपछि बेलायत पर्छ ।